Celebrating King's Day In The Netherlands (waMambo) | Save A Train
musha > Travel Europe > Vachipemberera Day waMambo In The Netherlands (waMambo)
Vachipemberera Day waMambo In The Netherlands (waMambo)
(Last Updated On: 04/06/2021)
Vachipemberera Day waMambo muNetherlands zvingave zvakanaka mubato iri Holland. On 27 Kubvumbi, Ivo vanopemberera zuva rokuberekwa nenziyo King Willem-Alexander, mumigwagwa mapato, misika nhata, uye mafaro nhumbi. Mambo pachake anofamba kubudikidza nyika yake mhuri. Pausiku hwakatangira Day waMambo, Husiku hwaMambo hunopembererwa pamwe chete mimhanzi inoratidza muThe Hague nemamwe maguta uye nhata huru yenyika ('Vakasununguka') pamusika Utrecht. Akagadzirira kuziva chii zvose pamusoro? pano chikonzero uchifanira kuva Vachipemberera Day waMambo muNetherlands.
*chitsamba! Day kwamambo mumwe chete mwedzi kure. Zvino ndiyo nguva yokuti bhuku rako Amsterdam pahotera rokupemberera Day raMambo muNetherlands. Vashanyi vanobva zvose pamusoro Netherlands, uye kuwedzera vakawanikwa bhuku mangwanani kuitira dzimba dziripo.
CHII CHIRI MUZITA?
pamavambo, Princess Day akanga vachipemberera Holland musi Wilhelmina zuva rokuberekwa (31 Nyamavhuvhu), kana iye achiri muchindakadzi. The bato akanga akawanda zvikamu kwairi, kusanganisira; mitambo vana vakawanda uye yakashongedzwa migwagwa. Apo Wilhelmina akava mambokadzi mutsva pashure pokufa kwababa vake, zvakanzi rakachinjwa dzamambokadzi Day.
Juliana, chinotevera mambokadzi uye mwanasikana Wilhelmina raMwari, rakakurumbira Day Queen pamusoro 30 April aine achimisa pamusoro Soestdijk. Beatrix uyewo vaipemberera Day Queen pamusoro 30 Kubvumbi (zvake bhavhdhe muna Ndira) asi zvichipesana amai, iye akatora mhuri yake yose uye akafamba munyika yose kushanyira makanzuru akawanda. King Willem Alexander akatevera tsika iyi. Akanga aberekwa ari 27 Kubvumbi uye ichi vakava pamutemo Day mu 2014 nokuti Kupemberera Day raMambo muNetherlands.
Orange Zvose pamusoro Kupemberera Day raMambo muNetherlands!
Mhuri Dutch youmambo unobereka zita: Imba Orange. Izvi anoreva ruvara Orange. Semagumo, hwava Holland National ruvara. On Day waMambo, uchawana wose akapfeka orenji neimwe nzira kana chimiro. saka, tora kunotenga!
KweBrussels kuna Utrecht Zvitima
Antwerp kuna Utrecht Zvitima
Paris kuna Utrecht Zvitima
Nepo Kupemberera Day King muNetherlands, vanhu vanobvumirwa kutengesa zvinhu mumugwagwa pasina yaida mvumo. Free Nhata dzemisika zvinoitirwa mumapaki uye mumigwagwa, nevanhu vakawanda kupa zvinhu zvavo vasingadiwi, mumhanzi, kana zvimwe zvekuvaraidza zviri kutengeswa. Pafunge ari garaji Sale, asi zvikuru pamwero! muna Utrecht, mumisika nhata vatombotanga usiku asati Day waMambo. Saka tora wako kufamba nemanyatera.
KweBrussels kuna reRotterdam Zvitima
Antwerp kuna reRotterdam Zvitima
Berlin kuna reRotterdam Zvitima
Paris kuna reRotterdam Zvitima
NGATITII tositi kuti Kupemberera Day raMambo muNetherlands!
ose mabiko kunoda tositi! Rudyi? On Day waMambo, Vanhu vanoita tositi kuna mambo Orange Kunorwadza, rakajeka Orange liqueur. Ehe saizvozvo, ichi anoramba aine tsika kupfeka orenji, wo! The zvokunwa akasikwa 1620 kupemberera Prince Fredrick Henry kuti kukunda. pakutanga, hazvina kuzivikanwa asi pashure William pamusoro Orange akava mambo wokutanga, zvakanzi yakabereka zvakare. kubvira ipapo, Orange Kunorwadza kwave achisonganira nemhuri Dutch youmambo.
Tiri Kunwa? doro, EHE SAIZVOZVO!
Holland anoda booze yavo uye pashure nemakumi emakore akangwara yokutengesa kubudikidza Heineken, dzavo Dutch vezvokutengeserana kuzvikudza, vose akapindwa muropa riri foamy inonaka nekita vanamwari panguva Day waMambo.
Aihwa doro girazi chakasara zvizere, hapana pfungwa chakasara pachena. Kana paine nokusingaperi rimwe zuva kuti zvechokwadi bvudzi rako unoburuswa, izvi zvingava ngazvive! Uye hazvisi chete Day waMambo, Night waMambo pamberi hafu mafaro. Zvinoita Kazhinji sezvo makabatikana Day waMambo kubvisa vana uye mhuri. Kuti zvinoreva kunyange zvishoma chinovhiringidza kuti teura doro renyu, uye slur mashoko ako.
Liege kuna Maastricht Zvitima
Charleroi kuna Maastricht Zvitima
Vachipemberera Day waMambo muNetherlands hakusi chete kuti vakuru. Kune zvakawanda mabasa kuitika mhiri guta nokuda diki uye muduku mwoyo kusanganisira chiso-painting, mitambo, uye mitambo zviitiko. Check Day mafaro mhuri peji kwaMambo mamwe mashoko.
Paris kuti The Hague Zvitima
WaMambo Night & Day Parties
Vachipemberera Day waMambo muNetherlands ari paruzhinji zororo asi zvechokwadi kwete zuva rokuzorora. The Dutch, ex-patsira, uye vashanyi zvakafanana vanodirana kuAmsterdam kwezuva rekupemberera. The mafaro dzinozivikanwa rinotanga avaida mukuru zuva (WaMambo Night) pamwe kupemberera kwacho kuramba yose guta iri Day waMambo. DJs kuridza mapato ari dzinoungana, akajeka akashongedzwa magwa anozadza migero, uye rarama mimhanzi inopararira mumigwagwa kubva Datenroku patios. Verenga zvimwe pamusoro waMambo Day zviitiko.
Vachipemberera Day waMambo muNetherlands pamusoro Canals
Never ane gridlock motokari anga mafaro zvokuti! On Day waMambo, zviuru zvakajeka yakashongedzwa zvikepe kurongedza rakamanikana Amsterdam migero. Hot Tip. Bhuku chikepe pachine!
Tora chikamu pagore Day waMambo muAmsterdam pamusoro zvinoshamisa 1.5-awa Canal rwendo nepakati peguta. Musashamisika panguva zvakajeka yakashongedzwa zvikepe uye vanonakidzwa mapfumo onboard zvinodhaka.
About basa iri:
– chinguva 90 maminitsi
– Tisangosiya mutsetse
– Yakadhindwa kana Mobile vhocha akagamuchira
– pakarepo chisimbiso
– Easy kukanzura
The Dutch, ex-patsira, uye vashanyi zvakafanana vanodirana kuAmsterdam kuKupemberera Zuva raMambo muNetherlands. Ita murege kurasikirwa chokwadi pamusoro mafaro, uye bhuku ikozvino kushandisa Save A Train pamwe No Mari zvakavanzika uye nyore sezvo 1, 2, 3!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrating-kings-day-netherlands%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / Zh-CN kuti / ja kana / mukati uye mimwe mitauro.
#KingsDay #waMambo #traveleurope europetravel Train Travel travelamsterdam travelnetherlands traveltips